Namibia dia manidy ireo vakoka lova fizahan-tany ary manome toromarika
Home » etn » Namibia dia manidy ireo vakoka lova fizahan-tany ary manome toromarika
Ny Minisiteran'ny Fanabeazam-pirenena, ny zavakanto ary ny kolontsaina Namibia dia nosoniavin'ny minisitra mpisolo toerana Martin Andjapa dia namoaka ity torolàlana maika ity ho an'i Namibia.
Ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana dia nanambara fa areti-mifindra manerantany ny COVID-19. Manaraka ny
Fanamafisana ny tranga roa COVID-19 any Namibia avy amin'ny Minisiteran'ny Fahasalamana sy ny asa sosialy amin'ny 14 martsa 2020, Andriamatoa, ny filohan'ny Repoblikan'i Namibia, Dr. Hage Geingob, dia nanambara ny fepetra fisorohana tokony hatao mba hiantohana ny fiarovana sy ny fahasalaman'ny Namibianina rehetra. Ny fepetra iray toy izany dia ny fandrarana ny fivoriana lehibe rehetra 1 vanim-potoana 30 andro.
In fahazavana avy any aoriana, Toroako izao fa ny tranokala rehetra dia latsaka ao ambanin'ny ambit ny ny Minisiteran'ny Fanabeazam-pirenena, ny zavakanto ary ny kolontsaina dia tokony hakatona miaraka aminy immediate effet mandra-pahamarika manaraka. Mandritra ny fotoana maharitra an'io toromarika io, ny Minisitera miaraka amin'ny fanohanan'ny
Ny Ministeran'ny fahasalamana sy ny serivisy sosialy dia hanohy hanara-maso sy hanombatombana ny toe-javatra ary hifanerasera mifanaraka amin'izany.
Mandritra izany fotoana izany dia entanina ny tsirairay hiantoka ny fepetra tokony horaisina, hanarahana ny toromarika avy amin'ny World Health Organization sy ny Ministeran'ny Fahasalamana sy ny asa sosialy.
Fihaonana an-tampon'ny fizahantany sy fitaterana any Nizeria: hetsika iray amin'ny fahafatesana?
Mampitsahatra ny fizahan-tany i Malezia ary manidy sisintany
Maninona ianao no tsy mila I-94 intsony handeha any Etazonia
Diplomasia fanaovana vaksiny nohazavain'i Min. Bartlett, nankafizin'ny World Tourism Network